Vono olona tany Toamasina :: Mpiambina iray karohina tamin’ ny fahafatesana telo mianaka • AoRaha
Vono olona tany Toamasina Mpiambina iray karohina tamin’ ny fahafatesana telo mianaka
Tsy hita popoka ary karohina ny mpiambina ny tanànan’ireo olona telo mianaka hita faty tany Vohitsara Toamasina, afak’omaly. Ilain’ny mpitandro filaminana amin’ny fanadihadiana io mpiambina io. Halaina am-bavany ihany koa ny olona rehetra nifanerasera farany tamin’izy telo mianaka nindaosin’ny fahafatesana ireto.
Teratany frantsay sy ny vadiny teratany malagasy ary ankizilahy iray, fito taona, ireo namoy ny ainy. Tao amin’ny trano fidiovana no nahitana ny vatana mangatsiakan’ izy ireo efa simba. Tombanana ho efa tamin’ny alakamisy lasa teo no nahafatesan’izy telo mianaka. Fofona ratsy no nanaitra ny mpiara-monina sy nahatonga ny polisy nijery ny tao an-trano, afak’omaly.
Tsy hita teny an-toerana ny mpiambina ny tanàna. Fantatra fa nisy entana voaroba tao amin’io trano lehibe io. Tsy mbola voafaritra kosa ny fomba namonoana na ny antony nitarika ny fahafatesan’ireo olona telo ireo. Mitohy ny fanadihadiana ataon’ny polisy, any Toamasina.
Tsiafahy :: Mitaky ny hanamboarana ny arabe ireo mponina
Zava-mahadomelina :: Kamiao mpitondra solika nahatrarana rongony fitonjato kilao